Le nqubomgomo yobumfihlo ("Inqubomgomo") sichaza indlela Isisebenzi Sewebhusayithi ("Isisebenzisi Sewebhusayithi", "thina", "thina" noma"yethu") uqoqa, uvikele futhi usebenzise ulwazi lomuntu siqu olungahlonza ("Ulwazi Lomuntu Siqu") wena ("Umsebenzisi", "yakho" noma"yakho") ingase ikunikezeblogmal .com iwebhusayithi kanye nanoma yimiphi imikhiqizo noma amasevisi ayo (ngokuhlangene,"Iwebhusayithi" noma"Amasevisi"). Futhi ichaza izinketho ongakhetha kuzo mayelana nokusebenzisa kwethu Ulwazi Lomuntu Siqu nokuthi ungafinyelela kanjani futhi ubuyekeze lolu lwazi. Le Nqubomgomo ayisebenzi emikhubeni yezinkampani esingezona ezazo noma esingaziphathi, noma kubantu esingabaqashi noma esingabaphathi.
Ukuqoqwa kolwazi lomuntu siqu
Sithola futhi sigcine noma yiluphi ulwazi osinikeza lona ngamabomu lapho udala i-akhawunti, ushicilela okuqukethwe, ugcwalisa noma yimaphi amafomu aku-inthanethi Kuwebhusayithi. Uma ludingeka lolu lwazi lungase luhlanganise ikheli lakho le-imeyili, igama, noma olunye ulwazi lomuntu siqu. Ungakhetha ukungasinikezeli ngolwazi oluthile, kodwa ungase ungakwazi ukusizakala kwezinye izici zeWebhusayithi. Abasebenzisi abangaqinisekile ngokuthi yiluphi ulwazi oluyisibopho bamukelekile ukuthi basithinte.
Ukuqoqwa kolwazi okungelona olomuntu siqu
Uma uvakashela Iwebhusayithi amaseva ethu aqopha ngokuzenzakalelayo imininingwane ethunyelwa yisiphequluli sakho. Le datha ingase ihlanganise ulwazi olufana nekheli le-IP ledivayisi yakho, uhlobo lwesiphequluli nenguqulo, uhlobo lwesistimu yokusebenza nenguqulo, izintandokazi zolimi noma ikhasi lewebhu obulivakashele ngaphambi kokuthi uze kuwebhusayithi yethu, amakhasi ewebhusayithi yethu owavakashelayo, isikhathi esichithwe kuyo. lawo makhasi, ulwazi olufunayo kuWebhusayithi yethu, izikhathi nezinsuku zokufinyelela, nezinye izibalo.
Ukuphatha imininingwane yomuntu
Uyakwazi ukufinyelela, wengeze, ubuyekeze futhi ususe Ulwazi Lomuntu Siqu oluthile olumayelana nawe. Imininingwane ongayibuka, uyibuyekeze, futhi uyisuse ingase ishintshe njengoba Iwebhusayithi noma Izinkonzo zishintsha. Nokho, lapho ubuyekeza ulwazi, singase sigcine ikhophi yolwazi olungabuyekeziwe kumarekhodi ethu. Olunye ulwazi lungase luhlale kumarekhodi ethu ayimfihlo ngemva kokususwa kwakho kolwazi olunjalo ku-akhawunti yakho. Sizogcina futhi sisebenzise imininingwane yakho njengoba kudingeka ukuze sithobele izibopho zethu ezingokomthetho, sixazulule izingxabano, futhi sisebenzise izivumelwano zethu. Singase sisebenzise noma iyiphi idatha ehlanganisiwe esuselwe noma ehlanganisa Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ngemva kokulubuyekeza noma ulususe, kodwa hhayi ngendlela ezohlonza wena siqu. Uma isikhathi sokugcina sesiphelile, Ulwazi Lomuntu Siqu luzosuswa. Ngakho-ke, ilungelo lokufinyelela, ilungelo lokusula, ilungelo lokulungiswa kanye nelungelo lokuphatheka kwedatha alikwazi ukuphoqelelwa ngemva kokuphela kwesikhathi sokugcinwa.
Ukusebenzisa kanye nokucutshungulwa kolwazi oluqoqiwe
Noma yiluphi ulwazi esiluqoqa kuwe lungase lusetshenziselwe ukwenza kube ngokwakho umuzwa wakho; ngcono Iwebhusayithi yethu; thumela ama-imeyili ezaziso njengezikhumbuzi zephasiwedi, izibuyekezo, njll; sebenzisa futhi usebenzise Iwebhusayithi yethu kanye Nezinsizakalo. Ulwazi Okungelona Lomuntu Oluqoqiwe lusetshenziselwa kuphela ukuhlonza amacala okungenzeka kube khona okuhlukumeza nokusungula imininingwane yezibalo mayelana nokusetshenziswa kweWebhusayithi. Lolu lwazi lwezibalo aluhlanganiswanga ngendlela ezohlonza noma yimuphi umsebenzisi wesistimu.
Singase sicubungule Ulwazi Lomuntu Siqu oluhlobene nawe uma kusebenza okukodwa kwalokhu okulandelayo: (i) Unikeze imvume yakho ngenhloso eyodwa noma ngaphezulu. Qaphela ukuthi ngaphansi kweminye imithetho singase sivunyelwe ukucubungula ulwazi kuze kube yilapho uphikisana nokucutshungulwa okunjalo (ngokuphuma), ngaphandle kokuthembela emvumeni noma kwezinye izisekelo zomthetho ezilandelayo ngezansi. Lokhu, nokho, akusebenzi, noma nini lapho ukucutshungulwa Kolwazi Lomuntu Siqu kungaphansi komthetho waseYurophu wokuvikela idatha; (ii) Ukuhlinzekwa kolwazi kuyadingeka ukuze kwenziwe isivumelwano nawe kanye/noma nanoma yiziphi izibopho zangaphambi kwenkontileka; (ii) Ukucubungula kuyadingeka ukuze kuthotshelwe isibopho somthetho ongaphansi kwaso; (iv) Ukucubungula kuhlobene nomsebenzi owenziwa ngokuzuzisa umphakathi noma ngokusebenzisa igunya elisemthethweni elinikezwe thina; (v) Ukucubungula kuyadingeka ngezinjongo zezintshisekelo ezisemthethweni ezilandelwa yithi noma omunye umuntu. Kunoma ikuphi, sizokujabulela ukucacisa isisekelo esiqondile somthetho esisebenza ekucutshungulweni, futhi ikakhulukazi ukuthi ukuhlinzekwa kwedatha yomuntu siqu kuyisidingo esingokomthetho noma senkontileka, noma isidingo esidingekayo ukuze ungene esivumelwaneni.
Ukudluliswa kolwazi nokugcinwa
Ngokuya ngendawo okuyo, ukudluliswa kwedatha kungase kuhlanganise ukudlulisa nokugcina ulwazi lwakho ezweni elingelona elakho. Unelungelo lokufunda ngesisekelo esingokomthetho sokudluliselwa kolwazi ezweni elingaphandle kwe-European Union noma kunoma iyiphi inhlangano yamazwe ngamazwe ebuswa umthetho wamazwe ngamazwe womphakathi noma emiswe amazwe amabili noma ngaphezulu, njenge-UN, kanye nezinyathelo zokuphepha ezithathwe nathi ukuze sivikele ulwazi lwakho. Uma ngabe yikuphi ukudluliswa okunjalo kwenzeka, ungathola okwengeziwe ngokubheka izigaba ezifanele zalo mbhalo noma ubuze nathi usebenzisa ulwazi olunikezwe esigabeni sokuxhumana.
Ungasebenzisa amalungelo athile mayelana nolwazi lwakho olucutshungulwe yithi. Ikakhulukazi, unelungelo lokwenza lokhu okulandelayo: (i) unelungelo lokuhoxisa imvume lapho unikeze imvume yakho ngaphambilini ekucutshungulweni kolwazi lwakho; (ii) unelungelo lokuphikisa ukucutshungulwa kolwazi lwakho uma ukucutshungulwa kwenziwa ngokomthetho ngaphandle kwemvume; (iii) unelungelo lokufunda uma ulwazi lucutshungulwa yithi, uthole ukudalulwa okuphathelene nezici ezithile zokucubungula futhi uthole ikhophi yolwazi olucutshungulwayo; (iv) unelungelo lokuqinisekisa ukunemba kolwazi lwakho futhi ucele ukuba lubuyekezwe noma lulungiswe; (v) unelungelo, ngaphansi kwezimo ezithile, lokukhawulela ukucutshungulwa kolwazi lwakho, uma kunjalo, ngeke sicubungule ulwazi lwakho nganoma iyiphi injongo ngaphandle kokulugcina; (vi) unelungelo, ngaphansi kwezimo ezithile, lokuthola ukusulwa Kolwazi Lwakho Lomuntu Siqu kithi; (vii) unelungelo lokuthola ulwazi lwakho ngendlela ehlelekile, ejwayele ukusetshenziswa futhi efundeka ngomshini futhi, uma kungenzeka ngokobuchwepheshe, ukuba idluliselwe kwesinye isilawuli ngaphandle kwesithiyo. Lokhu kunikezwa kusebenza kuphela uma ulwazi lwakho lucutshungulwa ngezindlela ezizenzakalelayo futhi ukucutshungulwa kusekelwe emvumweni yakho, kunkontileka oyingxenye yayo noma ezibophweni zangaphambili zenkontileka.
Ilungelo lokuphikisa ukucutshungulwa
Lapho Ulwazi Lomuntu Siqu lucutshungulwa khona ukuze kuzuze umphakathi, ngokusebenzisa igunya elisemthethweni elinikezwe thina noma ngezinjongo zezintshisakalo ezisemthethweni esiziphishekelwa yithi, ungaphikisana nalokho kucutshungulwa ngokunikeza isizathu esihlobene nesimo sakho ukuze uvumele ukuphikisa. Kufanele wazi ukuthi, nokho, uma Ulwazi lwakho lomuntu siqu lucutshungulwa ngenjongo yokumaketha okuqondile, ungaphikisana nalokho kucutshungulwa noma nini ngaphandle kokunikeza noma yiziphi izizathu. Ukuze ufunde, noma ngabe sicubungula Ulwazi Lomuntu Siqu ngezinjongo zokumaketha eziqondile, ungase ubhekisele ezigabeni ezifanele zalo mbhalo.
Asetshenziswa kanjani la malungelo
Noma yiziphi izicelo zokusebenzisa amalungelo omsebenzisi zingaqondiswa kumnikazi ngemininingwane yokuxhumana enikezwe kulo mbhalo. Lezi zicelo zingenziwa mahhala futhi zizosingathwa Umnikazi ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi njalo phakathi nenyanga eyodwa.
Asiqoqi ngamabomu noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma uneminyaka engaphansi kwe-13, sicela ungathumeli noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu ngewebhusayithi yethu noma isevisi. Sikhuthaza abazali nababheki abasemthethweni ukuthi baqaphe ukusetshenziswa kwe-inthanethi kwezingane zabo futhi basize ekuphoqeleleni le Nqubomgomo ngokuyala izingane zabo ukuba zingalokothi zinikeze Ulwazi Lomuntu Siqu Ngewebhusayithi yethu noma Isevisi ngaphandle kwemvume yabo. Uma unesizathu sokukholelwa ukuthi ingane engaphansi kweminyaka engu-13 isinikeze Ulwazi Lomuntu Siqu ngeWebhusayithi yethu noma Isevisi, sicela usithinte. Kufanele futhi ube neminyaka okungenani engu-16 ukuze uvumele ukucutshungulwa kwedatha yakho yomuntu siqu ezweni lakini (kwamanye amazwe singase sivumele umzali wakho noma umnakekeli wakho ukuba enze kanjalo egameni lakho).
Iwebhusayithi isebenzisa" amakhukhi"  ukusiza ukwenza kube ngokwakho ukuzizwisa kwakho ku-inthanethi. Ikhukhi ifayela lombhalo elibekwe kuhard disk yakho yiseva yekhasi lewebhu. Amakhukhi awakwazi ukusetshenziswa ukuqhuba izinhlelo noma ukuletha amagciwane ekhompyutheni yakho. Amakhukhi anikezwe wena ngokukhethekile, futhi angafundwa kuphela iseva yewebhu esizindeni esikunikeze ikhukhi. Singasebenzisa amakhukhi ukuze siqoqe, sigcine, futhi silandelele ulwazi ngezinjongo zezibalo ukuze sisebenzise Iwebhusayithi yethu kanye Namasevisi. Unamandla okwamukela noma ukwenqaba amakhukhi. Iziphequluli zewebhu eziningi zamukela amakhukhi ngokuzenzakalelayo, kodwa ungakwazi ukushintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuze wenqabe amakhukhi uma uthanda. Uma ukhetha ukwenqaba amakhukhi, ungase ungakwazi ukuzwa ngokugcwele izici zeWebhusayithi kanye Namasevisi. Ukuze ufunde kabanzi mayelana namakhukhi nokuthi ungawaphatha kanjani, vakashela internetcookies.org
Ezinye iziphequluli zifaka isici se-Do Not Track esibonisa amawebhusayithi owavakashelayo ukuthi awufuni ukuthi kulandelelwe umsebenzi wakho ku-inthanethi. Ukulandelela akufani nokusebenzisa noma ukuqoqa ulwazi oluhlobene newebhusayithi. Ngalezi zinhloso, ukulandelela kubhekisela ekuqoqeni ulwazi olungamhlonza umuntu siqu kubathengi abasebenzisa noma abavakashela iwebhusayithi noma isevisi ye-inthanethi njengoba bezulazula kumawebhusayithi ahlukahlukene ngokuhamba kwesikhathi. Indlela iziphequluli ezixhumana ngayo isignali ye-Do Not Track ayikakafani. Ngenxa yalokho, le webhusayithi ayikalungiselelwa ukutolika noma ukuphendula kumasiginali we-Ungalandeli axhunywe isiphequluli sakho. Noma kunjalo, njengoba kuchazwe ngokuningiliziwe kuyo yonke le Nqubomgomo, sikhawulela ukusebenzisa kwethu nokuqoqa imininingwane yakho siqu.
Singase sibonise izikhangiso eziku-inthanethi futhi singase sabelane ngolwazi oluhlanganisiwe nolungahlonzi mayelana namakhasimende ethu esiwaqoqa ngenqubo yokubhalisa noma ngezinhlolovo ze-inthanethi namaphromoshini nabakhangisi abathile. Asabelani ngolwazi lomuntu siqu olukhombekayo mayelana namakhasimende ngamanye nabakhangisi. Kwezinye izimo, singase sisebenzise lolu lwazi oluhlanganisiwe nolungahlonzi ukuze silethe izikhangiso eziklanyelwe izethameli ezihlosiwe.
IWebhusayithi yethu iqukethe izixhumanisi eziya kwamanye amawebhusayithi okungewona abanikazi noma angalawulwa yithi. Sicela uqaphele ukuthi asinasibopho ngezinqubo zobumfihlo zalawo mawebhusayithi noma abantu besithathu. Sikukhuthaza ukuthi uqaphele lapho ushiya Iwebhusayithi yethu futhi ufunde izitatimende zobumfihlo zewebhusayithi ngayinye engase iqoqe Ulwazi Lomuntu Siqu.
Sivikela ulwazi olunikeza kumaseva ekhompyutha endaweni elawulwayo, evikelekile, evikelekile ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, noma ukudalulwa. Sigcina izivikelo ezinengqondo zokuphatha, ezobuchwepheshe, nezomzimba emzamweni wokuvikela ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, ukuguqulwa, nokudalulwa Kolwazi Lomuntu Siqu ekulawuleni nasekugcinweni kwalo. Nokho, akukho ukudluliswa kwedatha nge-inthanethi noma inethiwekhi engenantambo okungaqinisekiswa. Ngakho-ke, ngenkathi silwela ukuvikela Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu, uyavuma ukuthi (i) kunemikhawulo yokuvikeleka nobumfihlo be-inthanethi esingaphezu kwamandla ethu; (ii) ukuvikeleka, ubuqotho, kanye nobumfihlo banoma yiluphi ulwazi kanye nayo yonke imininingwane kanye nedatha okuhwebelana ngayo phakathi kwakho neWebhusayithi yethu akunakuqinisekiswa; futhi (iii) noma yiluphi ulwazi olunjalo nedatha ingabukwa noma iphazanyiswe uma kuthuthwa umuntu wangaphandle, naphezu kwemizamo engcono kakhulu.
Esimeni lapho sazi ukuthi ukuphepha kweWebhusayithi kucekelwe phansi noma Ulwazi Lomuntu Siqu lwabasebenzisi ludalulwe kubantu besithathu abangahlobene ngenxa yomsebenzi wangaphandle, okuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, ukuhlaselwa kwezokuphepha noma ukukhwabanisa, sinelungelo ukuthatha izinyathelo ezifanele ngokufanelekile, okuhlanganisa, kodwa kungagcini lapho, uphenyo kanye nokubika, kanye nokwazisa nokusebenzisana neziphathimandla zomthetho. Esimeni sokwephulwa kwedatha, sizokwenza imizamo ephusile yokwazisa abantu abathintekile uma sikholwa ukuthi kunobungozi obuzwakalayo bokulimala kumsebenzisi ngenxa yokwephulwa komthetho noma uma isaziso sidingwa umthetho. Uma senza kanjalo, sizofaka isaziso kuWebhusayithi.
Sizodalula noma yiluphi ulwazi esiluqoqayo, esilusebenzisayo noma esilutholayo uma ludingeka noma luvunyelwa umthetho, njengokuthobela incwadi yokubizela enkantolo, noma inqubo yomthetho efanayo, futhi lapho sikholelwa ngobuqotho ukuthi ukudalula kuyadingeka ukuze kuvikelwe amalungelo ethu, ukuvikela ukuphepha kwakho. noma ukuphepha kwabanye, phenya ukukhwabanisa, noma uphendule isicelo sikahulumeni. Esimeni lapho sidlula kuguquko lwebhizinisi, olufana nokuhlanganiswa noma ukutholwa enye inkampani, noma ukuthengiswa kwazo zonke noma ingxenye yempahla yayo, i-akhawunti yakho yomsebenzisi, kanye nedatha yomuntu siqu cishe kuzoba phakathi kwezimpahla ezidluliswayo.
Sinelungelo lokushintsha le Nqubomgomo ehlobene neWebhusayithi noma Izinkonzo nganoma yisiphi isikhathi, ukusebenza lapho sithumela inguqulo ebuyekeziwe yale Nqubomgomo Kuwebhusayithi. Uma senza lokho sizothumela isaziso ekhasini eliyinhloko leWebhusayithi yethu. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kweWebhusayithi ngemva kwanoma yiziphi izinguquko ezinjalo kuzohlanganisa imvume yakho kulolo shintsho. Inqubomgomo idalwe nge I-WebsitePolicies.
Ukwamukelwa kwale nqubomgomo
Uyavuma ukuthi uyifundile le Pholisi futhi uyavumelana nayo yonke imigomo nemibandela yayo. Ngokusebenzisa Iwebhusayithi noma Izinkonzo zayo uyavuma ukuboshwa yile Nqubomgomo. Uma ungavumi ukuthobela imigomo yale Nqubomgomo, awugunyaziwe ukusebenzisa noma ukufinyelela Iwebhusayithi kanye Nezinsizakalo zayo.
Uma unombuzo mayelana nale Nqubomgomo, sicela usithinte.